मेरी छोरी मेकअप गर्न चाहन्छ, यो धेरै चाँडो छ? | बेजिया
मेरी छोरी मेकअप गर्न चाहन्छ, यो धेरै चाँडो छ?
टोय टोरेस | 12/01/2022 20:00 | सल्लाह आमा
बालबालिकाको जीवनको प्रत्येक चरण फरक, विशेष र सबै भन्दा माथि, तीव्र हुन्छ। बच्चाहरूको परिपक्वता प्रक्रिया तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको लागि फरक छ, तथापि, जटिलताहरू र तनावपूर्ण क्षणहरू सबैको लागि आउँछन्। विशेष गरी किशोरावस्था नजिकिँदै गर्दा, धेरैसँग हार्मोनल विकार र बच्चाहरु को व्यक्तित्व मा परिवर्तन, जसले गर्दा आमाबाबुलाई यो कसरी सही गर्ने भनेर राम्ररी थाहा हुँदैन।
किशोरावस्थामा निर्णयहरू लिनु जटिल हुन्छ, किनकि एक अर्थमा तिनीहरू वयस्कहरू देखिन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू अझै बच्चाहरू हुन्। बच्चाहरू जसले आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नै स्वाद र शौकहरू विकास गर्दैछन् जुन आज छन् तिनीहरूले इन्टरनेटबाट प्राप्त सबै जानकारी द्वारा सर्त। र त्यहि ठाउँमा बच्चाहरूले मेकअपको संसार जस्तै रमाईलो र विवादास्पद संसारहरू पत्ता लगाउँछन्।
1 मेरी छोरी मेकअप गर्न चाहन्छिन् तर मलाई लाग्छ यो चाँडो हो
1.1 उनलाई मेकअप गर्न सिकाउनुहोस्
मेरी छोरी मेकअप गर्न चाहन्छिन् तर मलाई लाग्छ यो चाँडो हो
धेरै केटीहरू र केटाहरू मेकअपप्रति भावुक हुन्छन्, किनकि तिनीहरू बच्चाहरू हुन् र ठूला-ठूलाहरूले के गर्छन् वा ड्रेस-अप खेल्छन् त्यसको नक्कल गर्न रमाईलो गर्छन्। मेकअप लगाउनु तिनीहरूको लागि खेल हो र यो हुँदा, यो अभिभावकहरूको लागि समस्या होइन। तर, के हुन्छ जब एउटी किशोरीले आफू मेकअप गर्न चाहन्छु भन्छिन्? वयस्क मेकअप के भएको छ, बाहिर जान, स्कूल जान वा साथीहरूसँग समय बिताउन।
त्यो क्षणमा, सबैभन्दा सामान्य कुरा यो हो कि तपाईसँग आफैलाई इन्कार गर्ने, उनी सानै छिन् भन्ने सोच्ने र उनको अगाडि त्यसरी व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति छ। केहि जो निस्सन्देह कसैलाई हुन सक्छ, यद्यपि यो अझै गल्ती हो। किनकि जब बच्चाले तपाईलाई इच्छा व्यक्त गर्दछ, उहाँको व्यक्तित्व कस्तो छ भनेर हेर्न दिनुहोस्, तपाईको अगाडि खुल्छ, विश्वासको अभ्यास गर्दैछ जुन अपूरणीय रूपमा तोड्न सकिन्छ।
त्यसकारण, त्यस्ता समाचारहरू प्राप्त गर्दा, पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियन्त्रण कायम राख्नु र कसरी कार्य गर्ने भनेर राम्ररी सोच्नु हो। केटीलाई चित्त दुखाउन सक्ने कुराहरू नभन्नुहोस्, उसलाई केटी हो वा उनी ठूली भएकी छिन् भनेर नभन्नुहोस्, किनकि सबै भन्दा सम्भावित कुरा यो हो कि अन्य चीजहरूको लागि तपाईंले उसलाई भन्नुहुन्छ कि ऊ अब केटी छैन। उनीहरुको चाहना सुन्नुहोस्, उसलाई कस्तो प्रकारको श्रृंगार चाहनुहुन्छ भनी सोध्नुहोस्उसलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ यसको बारेमा सोच्नुहुनेछ र अर्को पटक छलफल गर्नुहुनेछ।
उनलाई मेकअप गर्न सिकाउनुहोस्
यदि तपाइँकी छोरीले मेकअप गर्न चाहानुहुन्छ भने, उनी तपाइँको पक्षमा वा बिना नै। फरक यो हो कि यदि यो तपाइँको सहमति संग गर्छ भने, तपाईले यसलाई ठीकसँग गर्नुहुनेछ, सही उत्पादनहरूसँग र बिस्तारै मेकअप के हो भनेर सिक्दै। यदि तपाइँ यसलाई चलाखीमा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले सस्तो, उधारो वा खराब गुणस्तर उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उनलाई यो कसरी लागू गर्ने, वा मेकअप कसरी राम्रो देखिन मद्दत गर्ने भन्ने थाहा छैन, किनभने कस्मेटिक्स भनेको यही हो।
त्यो पल आउनै पर्छ, किनकि यदि छोरीले मेकअप गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन् भने ढिलो वा ढिलो आउनेछ। त्यसोभए, उसलाई रमाईलो संसार पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुहोस् मेकअपकिनभने रोमाञ्चक छ र धेरै कुरा सिक्न सक्छ को। आफ्नो छोरीलाई उनको पहिलो उत्पादनको लागि किनमेल गर्न लैजानुहोस्, किनभने यो आवश्यक छ कि उसले उमेर-उपयुक्त कस्मेटिक्स प्रयोग गर्छ।
सबै प्रकारका उत्पादनहरू प्रयोग नगरी नै तपाईंको छोरी खुसी हुने केही आधारभूत कुराहरू छान्नुहोस्। तपाईंले उसलाई केही रंगको मोइस्चराइजर किन्न सक्नुहुन्छ, घाम सुरक्षा कारक सहितको धेरै तरल क्रीम जसले उसको छालालाई पनि जोगाउँछ। गुलाबी टोनमा लिपस्टिक, जसको साथ तपाईंले आफ्नो ओठमा केही रङ देख्नुहुन्छ तर सूक्ष्म रूपमा। पनि सक्छ आँखाको लागि केही पृथ्वी टोन वा पीच छाया प्रयोग गर्नुहोस्, एक उत्पादन जसले तपाईंलाई आफ्नो गाला रङ गर्न मद्दत गर्नेछ।
यी आधारभूत कुराहरूको साथ तपाईंको छोरीले आफ्नो मेकअप झोला सुरु गर्न सक्छिन्। र तपाई, तपाईलाई त्यो थाहा पाउँदा मनको शान्ति हुनेछ तिनीहरूको उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जुन गुणस्तरको छ, तिनीहरूको उमेर अनुरूप र रङहरू जसले उसलाई पुरानो वा भेषमा देखाउँदैन। यसरी, उनी खुसी हुनेछिन्, उनले सुनेको, बुझेको महसुस गर्नेछिन् र जब उसले तपाईसँग कुरा गर्न आवश्यक छ, अनमोल विश्वास सिर्जना हुनेछ। निस्सन्देह यो लायक छ कि केहि, यद्यपि यसको लागि यो आफ्नो छोरी मेकअप मा राख्न आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » सल्लाह आमा » मेरी छोरी मेकअप गर्न चाहन्छ, यो धेरै चाँडो छ?
पहिलो सन्तानको आगमनले उत्पन्न हुने संकटको सामना कसरी गर्ने
Pikolinos बिक्रीको फाइदा लिनुहोस्, आराममा लगानी गर्नुहोस्